Ocean Apartment w/Pool 250mt Ballenas Beach - I-Airbnb
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguDesirée
Igumbi lestudio labantu ababini abanekhitshi, igumbi lokuhlambela, ithala kunye ne-air conditioning kwindawo yokuhlala enedama lokuqubha eliziimitha ezingama-250 ukusuka elwandle kunye nemizuzu emi-5 yokuhamba ukusuka embindini. Wifi, Ukhuseleko h24 kunye yokupaka.
* Iindleko zombane zibandakanyiwe kwixabiso!
(Akuqhelekanga ukuyifaka kwixabiso, nceda ungasebenzisi ngaphezu kwemfuneko).
Le ndlu inekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, igumbi lokuhlambela elineshawa, ibhedi ephindwe kabini, i-terrace yangasese ekhuselweyo ngeminatha yeengcongconi kunye nokufikelela egadini. Indawo yokuhlala inedama lokuqubha ekwabelwana ngalo, indawo yokuhlamba impahla, indawo yokupaka kunye nokhuseleko lweeyure ezingama-24.
Le ndlu ibekwe kwindawo yeqhinga laseLas Terrenas, ijikelezwe buhlaza, nto leyo eyenza ukuba ilungele ukuphumla ngoxolo, kodwa kwangaxeshanye ikwimizuzu embalwa yokuhamba ukusuka ePueblo de los Pescadores kunye neendawo zokutyela, imivalo. ngeyure yolonwabo, kunye neeklabhu zasebusuku. Ulwandle oludumileyo lwaseLas Ballenas lukumgama weemitha ezingama-250 kuphela.
Umbuki zindwendwe ngu- Desirée
Sisoloko sifumaneka kwiindwendwe zethu kangangoko sinakho yaye sifumaneka ngoWhatsapp nangeapp ka-Airbnb.
Iilwimi: Italiano, Español